Kuyingozi yini ukuhamba ngebhayisikili ngamahedfoni? - Ukuhamba Ngebhayisikili
Main > Ukuhamba Ngebhayisikili > Ama-headphone okuhamba ngebhayisikili - umhlahlandlela wokugcina
Ama-headphone okuhamba ngebhayisikili - umhlahlandlela wokugcina
Kuyingozi yini ukuhamba ngebhayisikili ngamahedfoni?
Ukugqokaamahedfoningenkathiukuhamba ngebhayisikiliakukho emthethweni kuUK, kodwa, kwinhlolovo ye-BBC ngonyaka owedlule, ama-90% wabaphenduli babevumelana nokuvalwa kwayo, yize u-16% wavuma ukuthi bakwenzile bona. Ah, kepha abukho ubufakazi bokuthiumakhalekhukhwini-ukugqoka kubeka abagibeli bamabhayisikili eingozi, kusho ikhempu ye-pro.Jul 15, 2015
('Back For Love' nguDJ Mayson) - Bengihlale ngingumlandeli omkhulu wokulalela umculo uma uphuma noma uhamba ngebhayisikili. Hhayi nje ngoba bengicabanga ukuthi kuzonginikeza ugqozi olwengeziwe futhi kwenze isikhathi sihambe ngokushesha, kodwa ngikholwa nokuthi empeleni kungenze ngashesha, kepha ngabe bekunjalo ngempela? Ingabe ingoma emnandi ingenze ngagibela ibhayisikili lami ngokushesha okukhulu? Futhi ingabe ingoma embi ingangibambezela? Izibuko zesayensi. Usho ukuthini uma uthi awunayo? O, kufanele banele. ('Back For Love' nguDJ Mayson) - Ucwaningo lwangempela lwesayensi selwenziwe ngale ndaba yiWaterhouse et al. eLiverpoolJohn Moores University, lapho behlolisise imiphumela yokwandisa noma yokwehlisa umculo ngo-10% ekusebenzeni kwamabhayisikili okuhamba phambili.
Bathola ukuthi abagibeli abalalela umculo osheshayo bakhiqiza amandla amaningi ku-cadence ephakeme futhi baqhubeka nokugibela esikhathini esithile, futhi ngokufanayo kubagibeli abahamba kancane. Kepha asinantshisekelo ekusebenzeni okuncane. Cha, sifuna ukwazi ukuthi umculo uwuthinta kanjani umsebenzi wami wokuhamba ngebhayisikili.
Ngakho-ke lapha size kuthrekhi yokuhlola ye-GCN. Yize lokho empeleni kungamanga. Sisanda kwehlela komunye wemigwaqo engiyithandayo eCotswolds.
Futhi yini isivivinyo? Yebo, ngizozama imizuzu emithathu kuya kweyisikhombisa. Umzamo wenombolo yokuqala uzophathwa futhi lokho kwenziwa ngaphandle komculo. lokho kuzwakala ngathi yebo, unawo umqondo.
fox iflothi x ukubuyekeza
Umzamo wesibili wenziwe ngomculo ohamba kancane futhi kuzwakala kanjena (umculo we-downtempo chill dance) bese kuthi umzamo wenombolo yesithathu wenziwe ngomculo osheshayo futhi uzwakala kancane kanjalo (umculo we-techno onzima) futhi yebo, ngiyazisola manje, ngiphakamise imizuzu eyisikhombisa yokusebenza. Iqale ngemizuzu emibili kanti ngasizathu simbe besicabanga ukuthi kungaba ngumqondo omuhle ukuyinyusa ifinyelele kwabayisikhombisa kanti bekubonakala kuwumqondo omuhle kakhulu lapho ngisehhovisi kodwa manje ngibe nesisu esikhulu nje sasemini .I ' nginovalo.
Ngokushesha nje, kufanelekile ukusho ukuphepha. Ukulalela umculo ngenkathi ugibela ibhayisikili kungaba yisihloko esihle esiphikisayo. Ngicabanga ukuthi abanye abantu bakhathazeka ngokuthi kuyingozi kancane, okuzonciphisa ikhono lakho lokushayela ithrafikhi ezungeze wena ukuzwa nxazonke.
Yize kungekho mthetho e-UK ovimbela ukugqokwa kwamahedfoni, ngokwami ​​ngithanda kuphela ukugqoka eyodwa endlebeni yami yangakwesobunxele, ohlangothini olungelona olwezimoto, noma kunjalo, uma ngikhuluma iqiniso, nakanjani ngake ngakusebenzisa kokubili esikhathini esedlule . Kepha esivivinyweni sanamuhla, ngizobe ngisebenzisa womabili ama-headphone. Ngilale ngijabule kakhulu izolo ebusuku ngokuthumela i-imeyili yeqembu kubaphathi bami bavuke badla isidlo sasekuseni, ngidumele kakhulu ngokuthi bonke baphendule bathi bamatasa futhi anginasiqiniseko, ini? Bekungukuhamba kwanamuhla okubasusile.
Mhlawumbe kwakuyimizamo emithathu ephezulu yemizuzu eyisikhombisa. Noma kunjalo, ngisemgqeni wokuqala manje, sengizodela i-wahoo yami ngoba ukuhlolwa okuyimpumputhe, akukho ukushaya kwenhliziyo, amandla, i-cadence, akukho ijubane, akukho lutho. Ngakho-ke, Stefan, ungaqopha ngemuva.
Sengikulungele ukuhamba - Kulungile, usukulungele yini uChris? - Ngikulungele - Okuthathu, okubili, okukodwa, hamba. (Injini yeloli) (ukuvunguza komoya) (ukuphefumula) (injini yeloli) - Okuthathu, okubili, okukodwa, sekuphelile. - Izinhlamvu ezingama-50.
Awazi ukuthi uhambe ibanga elingakanani noma ukuthi uhamba kanzima kanjani. Konke engikwaziyo ukuthi konke kubuhlungu Yebo, uvele uzizwe uwedwa, njengesikhathi sokugcina bengingazi ukuthi anginaso isikhathi phambi kwami ​​lapho ngangizama ukwenza okuthile. Okuxakile. (I-Downtempo chill dance chill music) Kuyaphazamisa kakhulu ukuzwa lo mculo unje ngoba wawunjalo, angazi, wawudidekile futhi kukwenza uphefumule kancane.
Noma kunjalo, empeleni bengicabanga ukuthi ngizohamba ngokushesha, nakho okuxakile ngoba akukho okulimazayo ngendlela efanayo. Ngakuthola kunzima impela ukuphusha, ngokuthembeka. Imvamisa, ungahle ube nesisindo esincane emzameni wesibili, futhi kungenzeka uzilimaze ekuqaleni komzamo.
Okuxakile. Ngaleso sikhathi imizuzu eyisikhombisa yokugcina nginomculo osheshayo manje futhi ngizizwa nginethemba elithe xaxa, kepha ngisesaba ukuzikhandla ngoba lawa amanye amabili ayesabeka, uma ngikhuluma iqiniso. okubili, okukodwa, hamba! (umculo onzima we-techno) ♪ rock that, let's go! Three - Okuthathu, okubili, okukodwa - Ngizamile kakhulu.
Ah, leli kuzoba ikhekhe lekhofi lesidlo sasemini. Lo mculo uhamba kakhulu kunento ebengizoyizwa ifudumala ngenkathi ngisagijima futhi luhlobo nje lwezinto ezingenze ngazizwa ngingehlulwa ngezinsuku ezinhle. Ah, ungangizwa kabi.
Azenzekanga kaningi, kepha lapho zenzeka, njengoba ngiqonde ngempela, ngazizwa ngimangalisa. Ngicabanga ukuthi konke lokhu kuvela, kuze kube namuhla ngisakholelwa ukuthi nginohlu lwadlalwayo olufanele, ngihamba ngifudumale kahle, futhi bekuzwakala kanjalo, akunjalo, ngizozincelisa ngibuyele e-cafe ngoba nakanjani sikwenzile ukuzondla kusuka ekhefi futhi sizoxoxa ngemiphumela uma sesikhona futhi. Ngakho-ke ngemuva kwemizamo emithathu enzima sayibuyisela enkantini.
Umzamo wokuqala ungama-watts angama-382. Lona ngumzamo ngaphandle komculo, uma ukhumbula. Ukushaya kwenhliziyo okungu-172, ama-cadence angama-84, namakhilomitha angama-44 ngehora ngebanga eliphelele lamakhilomitha ayi-5.14.
Umzamo wenombolo yesibili wawunomculo ohamba kancane Futhi kulapho engithole khona kwakunzima kakhulu ukuqhubeka. Uzokuqaphela lokhu ngokushaya kwenhliziyo yami, okungukushaya okuyisithupha ngomzuzu okuphansi, isilinganiso sama-watts ayi-166. I-wattage nayo ibiphansi, i-359.
I-cadence yayiseduze kakhulu. Lokho bekungu-85 rpm nesivinini esingamakhilomitha angama-43.5, okunginika ingqikithi yamamitha angama-40 engaphansi namakhilomitha ayi-5.1.
Ngemuva kwalokho umzamo wokugcina, umculo, lowo bekungumculo osheshayo, uhlobo lomculo engingase ngizwe ukuwulalela ngenkathi ufudumala ngenkathi ugijima. Ama-watts angama-385, amathathu ngaphezu kokulawula, amabhithi angu-176 ngomzuzu, wona aphakeme kunamanye, amabhithi amane ngomzuzu ngaphezulu, ama-86 RPM bese kuba amakhilomitha angama-45.6 ngehora, okushesha kakhulu, i-1.6 km / h ngokushesha, ngebanga eliphelele lika-5.34 km.
izindlela zebhayisikili eduze kwami
Ukushaya kwenhliziyo namandla konke kufana ncamashi, ngakho-ke mhlawumbe ngangihamba ngamandla, mhlawumbe ngaphoqa amandla ngaphezulu kwesiqongo bese ngiyehla ekwehleni. Uhlobo lwesilingo sesikhathi esigxile kakhudlwana ef ukuthi uma ubungagibela umjaho webhayisikili ubungeke ulwenze futhi waluthola ngqo wagxila futhi wahlanganyela. Ngimangele yini ngomphumela? Yebo yebo no-cha.
Ngiqonde ukuthi empeleni ngithole umculo ohamba kancane uyinto emangalisa kakhulu ngoba benginenkinga enkulu yokugxila, ngizithole sengikhukhuleka futhi ngilalele umculo esikhundleni sokugxila ekusebenzeni ebengifuna ukukwenza ebhayisikili, ngakho-ke kwangibambezela phansi kancane. Uma kukhulunywa ngomculo osheshayo, lokho akumangazi nakancane. Ngizwile umculo osheshayo kuhlu lwadlalwayo ngemuva kweminyaka yokufudumeza ukuqeqeshwa noma umjaho, futhi ngiyazi ngokuqinisekile ukuthi kusebenza kahle ukungigcina ngikhuthazekile, okusho ukuthi ngikwazi ukugxila kakhulu ekusebenzeni okwenziwa kukho ukuza .
Into eyodwa esiyaziyo ngalokhu kuhlolwa, noma kunjalo, ukuthi empeleni ukuhlola umuntu ngaphezu kwemizamo emithathu akwanele ukufika esiphethweni esihle, esinzima. Ukuze senze lokhu, kufanele sihlole abantu abaningana emizameni eminingi futhi empeleni sikwenze lokhu futhi izinsuku eziningana. Kepha siklwebhile ngokuqonda kwethu futhi sabona ukuthi umculo ungakusiza ukuthi uthole okuningi kuwe ngebhayisikili lakho.
Kusho ukuthini lokho kuwe ekhaya? Kusho ukuthi kufanele ucabangele umculo njengesikhuthazi. Uma ungazethembi ngokuzethemba nangokunethezeka ama-headphone, noma kungahle kungabi semthethweni ukuphuma nokuthi uhlala kuphi, usengakusebenzisa kumqeqeshi wasendlini noma ukusebenzise njengesisusa esishukumisayo ngaphambi kokushayela uhlu lwadlalwayo oluqukethe ngokushesha- umculo we-paced nomculo ohamba kancane. Umculo osheshayo wezikhathi zakho ezinzima bese ngezikhathi zakho zokuphumula, ungasebenzisa umculo ohamba kancane, ozolile.
Konke lokhu kungiholela embuzweni owodwa wokugcina. Uyawusebenzisa umculo ekhaya ukuzikhuthaza? Ukuqeqesha? Uma kunjalo, uyisebenzisa kanjani? Sazise ebhokisini lamazwana elingezansi. Uma uthole le ndatshana iheha futhi wafunda okuthile kuyo, sinikeze isithupha esikhulu futhi uma ufuna ukubheka ezinye izindatshana zesayensi ze-GCN, chofoza kalula lapha.
Yiziphi izindlebe ezingcono kakhulu zebhayisikili?
Ama-headphone amahle kakhulu wokuhamba ngebhayisikili
IJabra Elite Active 75t.Okuhamba phambilii-wireless yangempela. I-amahedfoni amahle kakhulukwabaningiabagibeli bamabhayisikili.
Ishaya iPowerBeats Pro.Okuhamba phambiliama-bass.Okuhamba phambiliama-bassamahedfoni wokuhamba ngebhayisikili.
UJaybird Vista.Okuhamba phambiliumsindo.
NgemuvaShokz Aeropex.Okuhamba phambiliukuqwashisa.
I-Apple AirPods Pro.Okuhamba phambiliI-apula.
Febhuwari 28, 2021
Yimaphi ama-headphone agqokwa abagibeli bamabhayisikili abaphambili?
Okunconoizifakwakhanda zebhayisikiliiyatholakala namuhla
UJaybird Vista. Impela ngeke iwe futhi zizwakala zimangalisa.
Ama-Ticpods 2 Pro +
UJabra Elite 85h.
I-Anker Soundcore Life P2.
I-Samsung Galaxy Buds.
UMar 9, 2021
Kuphephile ukugqoka ama-AirPod ngenkathi uhamba ngebhayisikili?
okujwayelekileAma-AirPodukuthi i-Pro ingeza ukukhanselwa komsindo okusebenzayo. Ngobaabagibeli bamabhayisikiliabathanda ukulalela umsindongenkathingigibele, ngithole ukuthi ukukhanselwa komsindo kusika umoya kanye nomsindo wethrafikhi, okwenza ama-podcast azwakale kangcono kakhulu kunalapho ugibela ngezindlebe zezintambo.
Ungakwazi yini ukugqoka ama-AirPod ngenkathi uhamba ngebhayisikili?
OkwangempelaAma-AirPodube nezingibe ezimbili ezinkulu zeabagibeli bamabhayisikili.Thinauzame ama-buds amasha ngokugibela—wenausathola umsindo womoya, kepha ikhwalithi yomsindo ingcono kakhulu futhisingasenamanje uzwe eduzeabagibeli bamabhayisikilinabashayeli bezimoto.Ngomhlaka 31, 2020
Ngingakwazi ukugqoka ama-AirPod ngenkathi ngigibela ibhayisikili?
okujwayelekileAma-AirPodukuthi i-Pro ingeza ukukhanselwa komsindo okusebenzayo. Ngobaabagibeli bamabhayisikiliabathanda ukulalela umsindongenkathingigibele, ngithole ukukhanselwa komsindo kusika umoya kanye nomsindo wethrafikhi, okwenza ama-podcast azwakale kangcono kakhulu kune-niniukugibela ngama-earbuds anentambo.
Ingabe abagibeli bamabhayisikili bayawulalela umculo?
KungenzekaLalela umculolapho beziqeqesha kodwa lokhucanube yingozi futhi u-pro akafuni ukuphahlazeka lapho eqeqeshwa ukuvikela imali yakhe. Futhi, ukugibela ngamaqembu kusetshenziselwa ukukhuthaza umoya weqembu nokuxhumana phakathi kwabagibeli ngakho-ke abafuni ukuthi abantu bavalelwe ezweni labo elincane.
Ngingalalela umculo ngenkathi ngigibela ibhayisikili?
Ukulalela umculo ngenkathiumjikelezo wakho usemthethweni, noma kunjalo, kungahle kungaphephe kakhulu kuwoyenzangakho-ke.Lalele umculokungakuphazamisa kulokho okwenzeka eduze kwakho futhi kungakuvimbela ekubeni uzwe ukuvelela kwezinye izimoto.Meyi 14, 2020
Ingabe ama-AirPod alungele ukuhamba ngebhayisikili ezintabeni?
Ngaphandle kwe-ukuhamba ngebhayisikili entabeni,Ama-AirPodzingama-headphone amahle kakhulu. Bengizisebenzisa amahora amaningi nsuku zonke futhi zinethezekile, noma ngabe sezingenile amahora amathathu noma ngaphezulu, ziyashaja ngokushesha, futhi kulula ukunamathela ephaketheni lakho ukuthwala.
Ingabe ama-AirPods alungele ipeloton?
Ngoba i-UPlatoonempeleni iyidivayisi engeyona eye-Apple, eyakhoAma-AirPodNgeke wazi ukuxhuma ngomlingo lapho uvula icala okokuqala. Ngakho-ke okokuqala lapho uzisebenzisa, kuzodingeka uzixhume ngesandla.Aug 4, 2020
is miso soup iphilile
Yimaphi ama-headphone we-Bluetooth ahamba phambili ngebhayisikili?
I-Aftershokz iyinkampani eyaziwa ngobuchwepheshe bokwenza amathambo kanti i-Aeropex iyona engayikhetha yakamuva. Esikhundleni sesipikha esihlala eduze kwendlebe yakho, i-Aftershokz iqondisa ukunyakaza phezulu kwesifuba sakho. Umphumela uba ukuthi uyawuzwa umculo kepha nemvelo.
Kuphephile yini ukugibela ibhayisikili eline-headphone?
Ngakho-ke ubufakazi bukhombisa ukuthi kungenzeka ukugibela ngokuphepha ngama-headphone, uma umgibeli webhayisikili eseqinisekile ukuthi basazi indawo ezungezile. Lo ngumbono owabiwa yiBritish Cycling: 'Kungcono ukusebenzisa zonke izinzwa zakho ngenkathi ugibela ibhayisikili kodwa ukuzwa kwakho akubaluleke kangako kunokubona kwakho,' kusho okhulumela le nhlangano.
Ingabe kukhona ama-earphone okuhamba ngebhayisikili e-UK?
Lezi zindlebe zamabhayisikili (e-UK) zivikelwe emanzini kuzo zonke izinkomba ezinesilinganiso se-IPX4, kepha iphuzu lokuthengisa eliyingqayizivele lemikhiqizo yakwaBose yizindlebe zabo.